Part 1. nile pụrụ égwu-ehichapụ iPhone
Part 2. Olee iji Hichapụ égwu si gị iPhone
Part 3. Olee iji Hichapụ App Data si gị iPhone
A obere azịza nke ajụjụ ga-NO! Ha nwere ike ghara. Ebe e nwere ọtụtụ ngwaahịa ngwa ọdịnala na gị iPhone kwesịrị arụ ọrụ nke ọma, ma ọ bụ ọ dịkarịa ala dị ka a nkịtị ekwentị, ị nwere ike wepu naanị họrọ ngwa site gị iPhone, karịsịa ndị na ị rụnyere aka (-atọ ndị ọzọ ngwa ọdịnala). N'okpuru ebe a bụ ndepụta nke a ole na ole ngwa ọdịnala a na-apụghị ehichapụ gị iPhone bụla:
Foto na igwefoto
Ebe ọ bụ na enweghị nke n'elu ngwa ga-eme ka ịdị adị iPhones efu, ha nwere ike ghara wepụrụ ekwentị gị.
Dị ka e kwuru n'ihu, ọ bụghị ihe niile ngwa nwere ike-ehichapụ gị iPhone. Otú ọ dị, ndị na ike ga-ehichapụ achọ ole na ole dị mfe nzọụkwụ-rụrụ mezue ọrụ. The nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ntụziaka na otú i nwere ike ihichapụ mbughari ngwa site gị iPhone na-nyere n'okpuru:
Site na Ihuenyo, enweta Ntọala.
Gaa General> ojiji> Jikwaa Nchekwa.
Site Nchekwa window, si ngwa 'ndepụta ahụ, pịa ngwa na ị chọrọ ka ihichapụ. (Ozi n'ihi na nke a ngosipụta.)
Site ọzọ window, mgbata Hichapụ App.
Site nkwenye igbe na Pop elu, kpatụ Hichapụ App wepụ ngwa si ​​gị iPhone.
Mgbe eji gị iPhone ruo ogologo oge na-agba ọsọ multiple ngwa ọdịnala na ya, ọtụtụ junk faịlụ na ngwa data Nwela echekwara na ekwentị gị. N'ozuzu, ị na-chọrọ wepụ mpu ngwa n'otu n'otu si gị iPhone kpam kpam ka ihichapụ ha kwekọrọ ekwekọ na junk faịlụ, na mgbe ahụ reinstall ha ka ha jiri ha kwesịrị. Ọzọ ọzọ bụ iji tọgharịa ekwentị gị na ụlọ ọrụ ntọala.
Ma n'elu ngwọta bụ ndị ihe ọma nanị n'ihi na ha bụ nanị nhọrọ ndị iPhone ọrụ nwere, tupu Wondershare mepụtara SafeEraser. Na Wondershare SafeEraser, ugbu a, ị nwere ike mfe wepụ junk na ndị ọzọ na-adịru nwa oge faịlụ na-echekwara na gị iPhone karịrị oge. Wondershare SafeEraser dị maka ma Windows na Mac kọmputa na ị nwere ike ibudata omume site na njikọ ndị nyere n'okpuru.
Olee otú ka Wepụ App Data si gị iPhone Iji Wondershare SafeEraser
Ị nwere ike iji Wondershare SafeEraser wepụ ngwa data gị iPhone mfe na ngwa ngwa. The nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ntụziaka na otú i nwere ike ime nke a na-nyere n'okpuru:
Jiri n'elu njikọ ibudata Wondershare SafeEraser maka kọmputa gị. (Wondershare SafeEraser maka a Windows kọmputa mee ihe n'ebe a.)
Wụnye ihe omume na-eji mgbe nile echichi usoro.
Ozugbo arụnyere, abụọ-pịa ya shortcut akara ngosi na-initialize.
Jikọọ gị iPhone ka PC na iji data USB na e Ẹnam ekese tinyere na ya.
Chere ruo mgbe chọrọ ọkwọ ụgbọala maka ejikọrọ iPhone na-ibudatara na arụnyere.
Ozugbo mere, si Wondershare SafeEraser isi window, pịa 1-Pịa nzacha na mkpocha button (na-anọchite anya ihe nnọchianya nke a sweeper).
Chere ruo mgbe SafeEraser-enyocha kwa maka faịlụ na ike ga-wepụrụ gị iPhone ọcha ngwa data.
Mgbe scanning zuru ezu, jide n'aka na App site ratụ ratụ Files checkbox na-enyocha.
Ego ma ọ bụ uncheck ọzọ checkboxes dị ka mkpa.
Ozugbo ị nwere afọ ojuju na gị nhọrọ, pịa nzacha na mkpocha na ala.
Chere ruo mgbe Wondershare SafeEraser ọcha elu faịlụ na mgbe ngwa data a na-ewepụ, mechie usoro ihe omume.
Wondershare SafeEraser 's ọzọ isi atụmatụ
Na mgbakwunye na iwepu junk data gị iPhone, Wondershare SafeEraser nakwa awade ọtụtụ ọrụ na-enye atụmatụ na ọtụtụ n'ime ya asọmpi na-adịghị. Ụfọdụ n'ime ndị dị otú ahụ atụmatụ na SafeEraser ka na-depụtara n'okpuru:
Space nchekwa - The ngwá ọrụ na-enye gị ohere mpikota onu ihe oyiyi na gị iPhone ka onwe ya ohere nchekwa.
Ihichapu Private Data - enye gị ohere iji wepụ niile onwe data dị ka ozi, nchọgharị akụkọ ihe mere, nchọgharị cache, wdg si gị iPhone.
Ihichapu ehichapụ faịlụ - enyere gị aka kpamkpam ebibi ama ehichapụ faịlụ nke mere na ha na-aghọ unrecoverable.
Ihichapu All Data - enyere gị aka ihichapu niile data gị iPhone na-eme ka ọ dị ka ọhụrụ.
Ịbụ a mpako nwe iPhone, ọ bụ eleghị anya na ị na-agaghị achọ iji ya naanị n'ihi na-akpọ na izi ozi nzube. N'okpuru ebe a bụ ndepụta nke a ole na ole na-ekpo ọkụ egwuregwu na i nwere ike ibudata na kpọọ na gị iPhone:
Egwuregwu na-akọ na echiche oge njem ebe ị na-akpọ na-eduzi ọrụ ga-azọpụta ndị mmadụ.
The Silent Age nwere ike ibudata site na njikọ nyere n'okpuru:
A gas ojii na-eje ozi bụ onye na-amanye itinye aka onwe ya na ibu nke egwuregwu mgbagwoju anya inyocha ihe nzuzo nke nna-ya.
Egwuregwu nwere ike ibudata site na njikọ nyere n'okpuru:
Unu ga-anapụtakwa a 'pụrụ iche' osisi n'aka ajọ nje na-agbalị ibibi ya ka ha onwe ha uru.
Botanicula nwere ike ibudata si n'okpuru njikọ:
Ọtụtụ n'ime ndị ugboro, ọ bụ mobile egwuregwu na n'ịwa ahụ junk faịlụ na-oke na size. Ekele Wondershare SafeEraser na junk data nwere ike wepụrụ mfe si iPhones ntọt ha ịrụ ọrụ.
> Resource> iPhone> Olee otú iji Hichapụ égwu si gị iPhone